Quaint Chalet e Wald im Pinzgau kunye Garden kufutshane Ski Slopes
Wald - Köningsleiten, Austria
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSusan - BELVILLA
USusan - BELVILLA ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Le chalet enomtsalane eWald im Pinzgau, eOstriya ifanelekile kwiholide kunye nabahlobo kunye nosapho. I-terrace kunye ne-balcony inika umbono omangalisayo weentaba ezikufutshane, ngelixa igadi inika indawo efanelekileyo yokuphumla.
Le chalet ikumda weSalzburg kunye neTyrol. Ukutyibiliza kwibala lemidlalo laseWildkogel nako kungafumaneka. Ukunqumla ilizwe ilele kumgama oziikhilomitha ezi-1, engomnye umsebenzi omnandi onokuthi ube yinxalenye yawo okanye ungqina Indlela ye asphalt ekhokelela eKrimmel, ukusuka kwiingxangxasi ukuya eSalzburg. Kumalunga ne-150 km onokuthi ujikeleze ngeentsuku ezi-3-4 kwindlela yebhayisekile yaseTauern. Endleleni, uya kufumana iihotele kunye neendawo zokuhlala zokulala ebusuku. Indawo yokutyela yase-Weyerhof ibonelela ngokutya okuphezulu kwaye kuyacetyiswa kakhulu.
Igadi egcinwe kakuhle kwi-chalet iqinisekisa ukuba unokufikelela kwindawo eluhlaza kunye namava okuhlala kwindawo yendalo. Igumbi lokuhlala linendawo yomlilo. Ukupaka kunokufumaneka lula kwindawo.
Ibhasi yokutyibilika imisa malunga ne-0.5 km kude. Isikhululo seenqwelomoya i-Innsbruck yi-103 km.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini, ithala), Igumbi lokulala elinegumbi lokuhlambela(ibhedi ephindwe kabini, ibhafu yokuhlambela, isitya sokuhlambela, ithafa), igumbi lokuhlambela(ishawa, isitya sokuhlamba), indlu yangasese)
Kumgangatho woku-1: (Igumbi lokuhlala(iTV, isitovu(inkuni), ibalcony), ikhitshi elivulekileyo(i-cooker(i-ceramic), i-oveni,i-microwave, i-dishwasher, isikhenkcezisi, ibalcony), igumbi lokulala(ibhedi enkulu, iTV), igumbi lokuhlambela( ishawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese, umatshini wokuhlamba))
igadi, indawo yokupaka, isitulo esiphezulu
4.67 ·Izimvo eziyi-21
4.67 · Izimvo eziyi-21
Umbuki zindwendwe ngu- Susan - BELVILLA
Izimvo eziyi-3 470
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wald - Köningsleiten